पासाङ्ग ठकुल्ला शुक्रबार, वैशाख १३, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपाका सुनसरी जिल्ला अध्यक्षमा योगेन्द्र प्रसाद मण्डल (पप्पु) चयन भएका छन् । नेकपा शीर्ष नेतृत्वले बैशाख ९ गते काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको हो ।
केन्द्रले जिल्लाको टुंगो लगाएसँगै एकताको प्रक्रियामा रहेका सबै संगठनको पनि एकता छिट्टै सम्पन्न हुनेमा आशा पलाएको छ । २०४६ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट राजनैतिक जीवन शुरु गरेका मण्डल २०५५ सालमा माओवादी आन्दोलनमा लागे । उनी सुनसरी, मोरङ्ग जिल्ला ईन्चार्ज, कोचिला ईन्चार्ज हुँदै माओवादीको पोलिट्ब्युरो सदस्य समेत बने । मण्डल नेकपा सुनसरीको अध्यक्षमा चयन भएसँगै सुनसरीमा राजनैतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सुनसरीको राजनैतिक अवस्थाका विषयमा जनतापाटीले गरेको कुराकानी ।
नेकपाको सुनसरी अध्यक्षमा चयन हुनु भएको छ । यहाँलाई बधाई छ ।
दुई पार्टी मिलेर एक भएको छ । अब यसलाई जिल्ला तहमा कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यदलले जिल्ला तहको नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाड गरेको छ । त्यसअनुसार पूर्व नेकपा माओवादीबाट मलाई अध्यक्ष बनाएको छ, भने पूर्व नेकपा एमालेबाट रमेश बस्नेतलाई जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । दुई जनाको सहमतिमा हामीले जिल्ला तहका पार्टीका कामहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका कार्यकर्ता तथा नेताहरुको सहमति अनुसार पार्टीलाई अगाडि बनाउने मेरो सोंच छ ।
तपाईलाई पार्टीले दिएको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ ?
कुनै पनि काम गर्दा चुनौती आउँछ । तर त्यो चुनौतीलाई चिरफार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जीवनभर राजनीति गर्ने आफ्नो जीवनको संघर्ष हो भन्ने ठानेको छु । रानीतिक जीवनलाई जनताको सेवा गर्न रोजेको हुँ । त्यसैले यो विषयलाई म ठूलो चुनौती ठान्दिन । तर काम गर्दै जाँदा जस्तोसुकै चुनौती आएपनि त्यसलाई सहजरुपमा स्विकार गर्छु ।
भखैरै जिल्लाको एकता टुंगो त लाग्यो तर स्थानीय तहको एकिकरण अहिलेसम्म भइसकेको छैन् । यो एकिकरणको जिम्मा पनि तपाइलाई आएको छ । यसमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
जिल्लामा करिब ९० प्रतिशत एकिकरण भइसकेको छ । बाँकी रहेको १० प्रतिशत चार÷पाँच दिनमै टुंगोमा पुग्छ । अहिले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । सम्भवत छिट्टै सहमतिका साथ यो बिषयलाई टुंग्याउँछौं ।
अहिले जिल्लामा नेतृत्वलाई लिएर नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कुनै अवसरमा बाधक पनि उत्तिकै हुन्छ । जुन दिन काम हुन्छ, त्यो दिनमात्र अवसर पनि देखिन्छ । विस्तारै सबै नेताहरु सहमतिमा आउँछन् । सबैको अधिकार हो, जिल्लाको नेतृत्व गरौँ भन्ने । तर एक जना नेतृत्वमा आएपछि सबै सहमतिमा आउँछन् । अहिले सबै नेताहरु सहमतिमा आइसकेका छन् ।
नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउन तपाईलाई कतिको सकस पर्‍यो ?
सबैभन्दा अग्रज नेताहरुमा ‘मुकेश जी’ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रोमा म थिए । त्यसपछि हिमाल सुवेदी लगायताका नेताहरु थिए । मैले शुरुमा नै सिनियरको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु परेमा उहाँलाई बनाउँनु पर्छ । मुकेश जीलाई बनाउनु पर्छ भन्ने दावी हामीहरुको पहिले देखिको थियो । तर पछाडी पुरानो नेतृत्वलाई पनि जिल्लाको नेतृत्वमा चयन गर्ने जुन मापदण्ड बन्यो । जहाँ पूर्व एमालेलाई अध्यक्ष दिए सचिव पूर्व माओवादीलाई । त्यस्तै, पूर्व माओवादीलाई अध्यक्ष दिए एमालेलाई सचिव । त्यसपछि पुरानोलाई दिने फिक्स भयो । जसअनुसार जुन जिल्लामा जस्को भाग पर्‍यो त्यही अनुसार सबै जिल्लामा पुरानो नेतृत्वलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । यसमा सबै साथीहरु सहमत भए ।
तर तपाईलाई चिठ्ठा प¥यो भनेर नेताहरुले असंन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, होइन र ?
मैले नैतिकताका आधारमा ‘मुकेश जी’ लाई अध्यक्ष बनाउन पर्छ भनेकै थिए । अग्रजको आधारमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि म नै थिए । त्यसपछि पूर्व माओवादीको अध्यक्ष पनि म नै थिए । पार्टीको मापदण्ड अनुसार त सुनसरी पूर्व माओवादीलाई अध्यक्ष परेपछि म अध्यक्ष बनेको हुँ । यही अनुरुप पार्टीमा सहमति पनि बनेको छ । अहिले सबैले मलाई साथ पनि दिएका छन् ।
आठ महिना भित्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ । तपाईले यो असन्तुष्टिकाबीच सम्मेलन गरिसक्नु हुन्छ ?
काम गरेपछि सबै समस्याको हल हुन्छ । कुर्सीमा बसेर मात्र काम हुँदैन । मेहेनत र संघर्षद्वारा अगाडि बढेपछि पाँच/सात महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ ।
तपाईले भने जस्तो सहज छ, सम्मेलन गर्न ?
राजनीति गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैलाई अधिकार बराबरी हुन्छ । अधिकार सरह नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता सबैमा हुन्छ । अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको मन हुन्छ । तर पार्टीको अनुशासन अनुसार पनि चल्नु पर्छ । नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भैरहन्छ । समय अनुसार नेतृत्वमा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । सम्मेलन आफैमा ठूलो कुरा होइन । म एक इमानदार मान्छे हुँ । सबै साथीहरुलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने गरी नेतृत्वको चयन हुन्छ । जनताको सेवा गर्नेमा सबै नेताको भूमिका हुनुपर्छ ।
जिल्लामा दुई वटै पार्टीको आ–आफनै पार्टी कार्यालय छ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
पार्टी एकता भएपछि शुरुमा एक कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा म पनि थिए । कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने काम त्यही कार्यदलले गरेको थियो । त्यसैले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या छैन ।
नेकपा भित्र गुट उपगुटका कुरा आइरहेका छन् । यसको अन्त्यका लागि तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
गुट उपगुटको कुरा यस्तो छ । विपक्ष भएन भने नेतृत्वमा रहेको मानिस राजा महाराजा भैहाल्छन् । विरोध पनि गर्नै पर्छ । गरेन भने मानिसको मानसिकता अलि गडबढ भैहाल्छन् । विरोध गर्ने मानिस भएन भने राम्रो काम गर्न सकिदैन ।
गुट र उपगुट पार्टीमा आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
गुट भएन भने मान्छेको मानसिकता बिग्रिदै जान्छ । गुट भएपछि सचेत गराउने हो । आलोचना र आत्मआलोचना हुन्छन् । गुट भएर पार्टी सिध्याउने होइन । गुट भनेको विचार र जनतालाई सेवा गर्ने उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
यस कारण रोकिन्छ लोकसेवाको विज्ञापन बिहीबार, जेठ ३०, २०७६
त्रिवि सेवा आयोग खारेजीको माग गर्दै १९ दिनदेखि अनशनमा विद्यार्थीः आयोग मौन शुक्रबार, जेठ २४, २०७६
१४ जिल्लामा हतियारसहित विप्लवका लडाकु ! बिहीबार, जेठ २३, २०७६